အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကြော်ငြာကဏ္ဍ	3 Responses to WHIZZO TYPING TUTOR Tin Tin Oo on July 17, 2012 at 2:06 pm Thanks much for your free Myanmar language typing lesson. After finishing lesson ” မမဝဝထထက၊အကပထမ။ကပါကပါမမ၇ာ၊ညညလသာသာ။ညအခါငါစာ၇၊မမဝဝထထက။ “, what should we try for other Myanmar ” alphabets & vowels ” with thanks again.
Naing Kyaw on July 18, 2012 at 10:43 am အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ရလို့ မြန်မာစာရိုက်လေ့ကျင့်လိုသူများအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ် ၊ အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ် ။ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ။
aye aye on July 19, 2012 at 6:07 pm ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်
ဆောင်းလူ - သူမနှင့် ဘ၀ ...	ဖိုးထက် - လူပါးဝသော စာအုပ်	ကာတွန်းအောင်မော် - သူတို့အထက်ရဲ့ အထက်က ကောင်	ကာတွန်း ATH - ဟောက်သံထွက်ပေါ် တို့လွှတ်တော်	ဆောင်းလူ - အပြာကား	ကိုသစ် (သီတဂူ) - ရေသန့်၊ လူသန့်၊ စိတ်မသန့်တသန့်	မြဒေါင်းနွယ် - သူမ၏ ချစ်သူ	HTC One M9 မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်	ဆောင်းယွန်းလ - ဇာတ်	စိုးနေလင်း - ဆင်သွားပေမယ့် လမ်းမဖြစ်တဲ့ ကဗျာ	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားတဲ့သူကို သိစေချင်လွန်းလို့ ရင်ဖွင့်တာပါ Mee Fah Luang forcing out Burmese Refugees from Thailand's camp
၀ါရှင်တန်ဒီစီမြန်မာကွန်မြူနီတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံပွဲ ဖိတ်စာထွက်ပြီ အရှင်ကုသလသာမိ (အတည်မဲ့) - တိုင်းပြည်ကောင်းစားစေလိုလျှင် နှလုံးသည်းပွတ်ကို ဂရုစိုက်ပါ
စာပဒေသာ ကောက်စာများလင်းအေးထင် - ဘုရားပေါ်မှာ